dhuuqmada siilka iyo guska yaa raaxo hela | Gaaloos.com
Home » galmada » dhuuqmada siilka iyo guska yaa raaxo hela
dhuuqmada siilka iyo guska yaa raaxo hela
Waxaa jira calaamado badan oo aad ku ogaan karto in ninka kugu xeran balse weli aadan la aqal galin in uu yahay mid kuu qalma iyo in kale, waxa ayna shumis.net ku siineysaa dhowr calaamad oo hadaad aragto il gaar ah isaga yeelo .
1- Maba Xasuusto Wax Yaabaha Aad Jeceshahay : hadii bilooyin ay ka soo wareegteen ama sanad mudada aad isku xeran tihiin oo uusan gacaliyahaaga xasuusaneyn wax yaabaha aad ka hesho iyo kuwo aadan ka helin ee kaa careysiiya hadaba ninkaas ila gaar ah isaga yeelo .
Ma aha ka bad badis in ninka uu daryeelo lamaantiisa oo uu si fog u ogaado wax yaabaha ay ka hesho oo uu xifido
2- Dan Kama Laha Oohintaada Mana Daryeelo Dareemahaaga : waxaa jira rag badan oo aan dhag jalaq u siin oohinta lamaanayaashooda , gacalisada oo ooyneysa ayaysan hadana weydiineyn waxa ku dhacay , waxa uu sugayaa illaa ay ka degto markaas ayuu hadana dood la galayaa , hadaba kaasi kuma anfacayo .
3- Howlihiisa Ayaa Badan Mana Helayo Waqti Uu Kuula Hadlo : shaqada waqti gaar ah ayay leedahay , jaceylkana isna waqti , balse macquul ma aha in maalintii dhan ka mashquulsanaanto marka saaxiboow aan xariifka aheyn kala saar shaqada iyo jaceylka .
4- Dan Kama Laha Saaxibaadada : ulama jeedi in si weyn aad u buun buuniso balse qadari saaxibada lamaantaada .
Hadaba shumis ayaa kuula talineysa gabaryaheey haddii aad arimahaan ku aragto in aad si saraaxad ah wax ugu sheegto gacaliyaagha si uu u badalo dabcigaas.
Title: dhuuqmada siilka iyo guska yaa raaxo hela